Tranny ဟောင်းသည် fetish မှသင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်၌လွတ်လပ်မှုရရှိသည်
ထွ tranny fetish ကနေလွတ်လပ်မှုကိုတွေ့
ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုကျွန်တော် porn အတွက်ရှာဖွေနေစဉ် ၁၀ ရက်သာကြာသည်။ သူ့ရဲ့လက်တွေကကျွန်တော့်ဘဝကိုလုံးလုံးပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်။ စိတ်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့စိတ်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ဆီကနေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုကိုကျူးလွန်နေတဲ့ ၃ နှစ်ရှည်ဆက်ဆံမှုကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ကနေငါဟာဒီဘ ၀ ကိုငါ့ရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ခြင်းထက်မကဂုဏ်တင်တယ်။
ရိုးရှင်းသည့်အရာမှာနှစ်ပေါင်း ၂၀ တိုင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်သင်ပိုမိုရိုက်လေလေ၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏လိင်စွမ်းရည်ကိုတိုးပွားစေသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ခဲ့သည်။ ငါအမှားလုပ်မိလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခွင့်လွှတ်တယ်၊
ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအသစ်တီထွင်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်၏လိုအပ်ချက်သည်အချို့သောလိင်အင်္ဂါဇာတ်လမ်းများကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့သည်၊ ငါကြိုးစားခဲ့သမျှငါဖယ်ထုတ်။ မရနိုင်ပါ၊ မည်သည့် tranny မဆိုသိလိမ့်မည်။ လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်သည်ဖောက်ဖျက်နေကြောင်းကျွန်ုပ်၏လက်ရှိလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုအက်ကွဲကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးဆရာဝန်၏ခွင့်ပြုချက်နှင့်အရာအားလုံးနှင့်အတူဟော်မုန်းများသောက်ရန်အလွန်နီးစပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ကိုတားဆီးခဲ့တဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာကငါ့မုတ်ဆိတ်ပေါ်ကလေဆာရောင်ခြည်အတွေးပဲ။
Long ကပုံပြင်တိုတောင်း။ အကြှနျုပျ၏လက်ရှိမိန်းကလေးငါ့ကိုအတူ flyer ။ ကျနော်တို့အတူတကွသောအခါ ပို. ပို. စိုးရိမ်ပူပန်ရတဲ့နှင့်အလိုဆန္ဒလာအောင်နှိုးဆွဖို့လမ်းအဖြစ် porn သုံးပြီး ed နှင့်အတူပေါ်နှင့်အပေါ်တိုက်ပွဲတွေ, ဒါပေမယ့်သင်တန်း၏ဤ site ပေါ်တွင်ဗီဒီယိုမှာဖော်ပြထားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လျော့နည်းငါမှတဆင့်ပါပြီတိကျစွာကားအဘယ်သို့နှင့် ဒီထက်အောင်မြင်မှုရ။ ငါနောက်ဆုံးမှာငါသဘောရှိ၏သူတို့အား penile ပန့်များသုံးစွဲဖို့ခဲ့ကြပေသည်။
ငါ၏အရည်းစားအိမ်မှာမရောက်မှီဒီတော့တစ်ပါတ်အကြောင်းကိုငါသည်ဤ site ကိုရှာတွေ့ခြင်းနှင့်စတင်ခဲ့သည်။ ငါသာဒီတနင်္ဂနွေတစ်ဝက်တစ် cialis ယူ (အဘယ်သူမျှမအံ့သြဖွယ်များငါထိုသို့ပြုလုပ်ရန်နှစ်ပေါင်း shit chomping ပြီ) နှင့်နီးပါး shagging သူမ၏ထွက်ဝတ်ဆင်။ ငါလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောခံစားရတယ်, အမှန်တကယ်သူမရှိခဲ့သည်ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ သာ 10 ရက်ပေါင်းနှင့်သူမ၏အဘို့အကြှနျုပျ၏အလိုဆန္ဒမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
ဒီ site ကိုကျွန်တော်မတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုရင်၊ အရမ်းအစွန်းရောက်တဲ့အပြင်ရှေ့ကနေမကျေနပ်နိုင်တဲ့ porn ရဲ့ရှေ့မှောက်မှာရှိတဲ့ငုပ်နေတဲ့ကြက်တစ်ကောင်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးပမ်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အထီးကျန်ဟောင်း tranny ကိုကျွန်တော်အဆုံးသတ်လိုက်လိမ့်မယ်။ အဲဒီအစားငါနောက်တဖန်ငါဖြစ်၏။ ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးအတွက်ပုံမှန်ကောင်လေး။ ရူးနေတယ် ကောင်းတယ်ထက်ပိုကောင်းတယ် ငါဘယ်တော့မှပြန်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ ငါဟာငါ့ဘဝကိုပြန်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးအခုငါတခြားသူတွေကိုတတ်နိုင်သမျှကူညီချင်တယ်။ လူတိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးလှုံ့ဆော်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ထမြောက်ခဲ့သည် !!!!
LINK - Re: အကိုပြန်ဖွင့ tranny ။ ကျောတစ်ဦးသည်လူဖြစ်ခြင်းမှနောက်ဆုံးအနေတဲ့လမ်း။